Talo soo jeedin ku saabsan wax sixitaan - WardheerNews
W/Q Muxammad khaliif Xirsi
Aniga oo soo xiganaya ballanqaadkii Ra’iisul Jamhuuriye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ee ahaa maamul wanaagga iyo u gurmadka abaaraha ayaan soo jeedinayaa erayo iga ah wax sixitaan oo kaliya.
Kulanka qabsoomay 16kii Abril, 2017 waxa uu ahaa mid uu Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayleh ku casumay shaqaalaha Wasaaraddiisa Hotel City Palace ujeeddaduna ahayd in “Shaqaalaha Wasaaradda la is baro”.
Wasiir C/raxmaan Ducaaale Beyle
Kulanka kale oo ka dhacay Muqdishu 17kii Abril, 2017, waxaa qabtay Wasiirka Warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yarisow) walow aysan ii muuqan goobta uu ku qabtay kulankan. Mawduuca kulankaanu waxa uu ahaa “xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay’adaha dowladda” waxaana ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ka kala socday Xafiisyada Ra’iisul Wasaaraha, Madaxtooyada, Wasaaradaha Dowladda iyo Qeybta Warfaafinta ee AMISOM.
Qof kasta oo ka mid ah Shaqaalaha Wasaaraddu waxa uu hoos yimadaa qayb ama waax ka mid ah Wasaaradda.
Wasaaraddu waxay leedahay sidaan filayo Waax qaabilsan Shaqaalaha.
Qof kasta oo ka mid ah shaqaaluhu waxa uu leeyahay waajib shaqo oo ay kula xisaabtamayso cidda ka sarraysa xisaabtankaasoo sii maraya jaranjaro is dabataxan laga bilaabo agaasime guud, wasiir xigeen ilaa uu ka gaarayo ilaa xafiiska Wasiirka.
Khasab ma aha oo looma baahna in ay is wada yaqaanniin shaqaalaha Dawladdu waxaase muhim ah in xil-gudashada shaqaalaha ama waajibaadkooda iyo xuquuqdoodaba loo marayo xeerarka nidaamiya maamulka guud iyo midka u gaarka ah hay’ad kasta.
Waxaan kaloo ku talin lahaa una jeedin lahaa Madaxeyne Farmaajo, Ra’iisaul Wasaare Kheyre, iyo dhammaan mas’uuliyiinta kale ee Xukuumadda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada, in ay gabi ahaanba baddalaan qaabka xafladaha martiqaadyada iyo kulammada kana dhigaan sida soo socota: b) in aan kulan lagu qaban meel la kireeyey beddelkeedna lagu qabto dhismaha hay’adda t) in marti-qaad kasta ee la qabanayo laga dhigo mid dhaqaale uruurin (fund-raising) ah. Waa in la iclaamiyo in ay qadadu ama cashadu noqoto “cun iskana bixi” ee aysan noqon “bilaash ku cun” (eat for free). Taasi waxay noqonaysaa tillaabo waddaninnimo iyo isu arxamid ay inaga dhaxlaan jiilka soo socda. Faa’idooyinka qaabkani leeyahay waxaa ka mid ah b) in uu qofku wax cunay isla markaana caawimaad gaystey t) dadka oo isku barta munaasabaddan haddiiba loo baahnaa is barasho j) Dakhliga ka soo baxa dhaqaale uruurintaani waa inuu ku dhacaa sanduuqa lagu kaalmaynayo dadkeenna abaartu halakaysay ka dibna sidaa loo joogteeyo oo aynnu ka dhiganno siyaasad (policy).
Waxaa kulammadaan 100ka ah sannad kasta inooga baxa qiyaastii: b) 500 oo saacadood ee loo shaqayn lahaa Qaranka; t) Munaasabaddiiba waxaa ka qaybgala dad aan ka yarayn qiyaastii 50 qof oo shaqaale ah tiradaasoo noqonaysa 5000 oo qof boqolka munaasabadood; j) Saacadaha kulammadaa loo fadhiyo wuxuu kiiba qiyaastii noqonayaa (approximately)
5 saacadood marka lagu daro qabanqaabadii kulanka; x) Kharajka ku baxaa waxa uu qiyaastii (approximately) noqon karaa USD1000 munaasabad kasta ee ah =100×1000 = 100,000 (USD boqol kun).
Haddii 500 oo saacadood oo ka baaqatay shaqada waxsoo saarka shaqaala loo baddalo lacag waxaa lagu qiyaasi karaa: ka soo qaad in 5taa boqol ee qof uu qiyaasta meel-dhexaadka ah (medium) qaato USD5 saacaddiiba markaa lagu dhufto USD5x5 saacadood x500 ee saacadood = 100munaasaboodX50qofX500saacadoodX5USD=USD12,500,000 (Laboiyotoban-milyan-iyo shanboqol oo kun).
Muxammad khaliif Xirsi